Indlu Yokuqasha E-Colaba, eMumbai
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Maharashtra » Mumbai » Colaba » Indlu Yokuqasha E-Colaba, eMumbai1
India, Maharashtra, Mumbai, Colaba
Ifulethi elibanzi le-1 rk multistorey liyatholakala ukuze liqashwe eColaba, eMumbai. Inendawo engama-350 sqft enendawo yokhaphethi eyi-250 sqft. Impahla iyatholakala ngokuqashwa njalo ngenyanga kwama-Rs. 50,000. Yimpahla enefenisha. Ibheke ukuqondiswa ngaseningizimu. Le ndawo yokuhlala isilungele ukungena. Isiza sisondelene kakhulu nezinsiza zomphakathi ezahlukahlukene. Uma unentshisekelo, sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Xhumana nomkhangisi 128602xxxx
Lesi siqhingi sitholakala eningizimu mumbai, saqanjwa ngokuthi uCandil ngesikhathi sokubusa kwamaPutukezi. Ngemuva kokuthi iBrithani ithathe lesi sifunda, yaqanjwa ngokuthi iColio. Iziteshi eziseduze kakhulu zikaloliwe i-Churchgate, neChhatrapati Shivaji Terminus. Le ndawo iheha izivakashi eziphakeme njengeColaba Causeway, iColaba Observatory, iCowasji Jehangir Hall, iSonto lamaGama Elingcwele, iProng's Lighthouse, iSango laseNdiya, iSassoon Docks, i-David Sassoon Library yasendaweni. IConnecactionColaba ixhumeke kahle kulo lonke idolobha lase-mumbai ngenethiwekhi ebanzi yemigwaqo. I-Brihanmumbai Electricity Supply and Transport noma i-BEST ihlinzeka ngemizila yebhasi edlula endaweni leyo. Izindlela ezahlukahlukene zamabhasi ezihamba kule ndawo zihlanganisa 1, AS-1 AS, 2 Ltd, 3, 4 Ltd, 6 Ltd, 6 Exp, AS-6 AS, 7 Ltd, 8 Ltd, C-8 EXP, 9, 11 Ltd. , 20, 21 Ltd, 22 Ltd, 66, 69, njll. Real EstateColaba inikezela ngezindlu eziningi ezithengiswayo. Uhla lwamakamelo aqukethe amayunithi ayi-1, 2 no-3 BHK. Izakhiwo ezithengiswayo ziza nezintengo ezahlukahlukene ezisukela kuma-lakh ambalwa ukuya kuma-crores ambalwa. Zombili izindlu ezilungele ukuhambisa-izindlu namafulethi asakhiwayo akhona lapha. IColaba inikeza indawo yokuhlala enhle emangalisayo enokuthula ukuba neyakho indlu. Ingqalasizinda YomphakathiIngqalasizinda yezenhlalo yaseColaba ithuthukiswe kahle. IColaba inezikole eziningi, izibhedlela, amabhange nezindawo zokudlela. Phakathi kwezikole ezahlukahlukene kanye namakolishi kule ndawo naseduze kwale ndawo, okudumile kakhulu yiSerra International School, iFirst birds, Naval Public School, Kendriya Vidyalaya, Navy Children School, Dunnes Institute, Garden School, kanye neSt Annes High School. Ezinye zezibhedlela ezaziwayo kanye namakhaya asebekhulile abandakanya isibhedlela iKalajot, isibhedlela iWadia, iBombay Hospital kanye neBedical Research Institute, iCama & Albless Hospital, iSt Georges Hospital, kanye neBeramjis Hospital, njll. Bank Bank, Syndicate Bank, Canara Bank, Punjab I-National Bank, i-Dena Bank, i-Axis Bank, i-State Bank of India inamagatsha ayo kule ndawo.